Mini Lyrics 7.0.676 Full Version Serial...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Mini Lyrics 7.0.6 Full Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးကတော့ အရမ်းမိုက်တယ်နော် သီချင်းဝါသနာရှင်တွေ အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ကောင်လေးပါ...!ကိုယ့်စက်ထဲမှာရှိတဲ့ English Song ကိုဖွင့်ထားရုံဖြင့် သီချင်းစာသားလေးတွေ အလိုလျောက် အွန်လိုင်းမှနေပြီးရှာပေးတဲ့ Software လေးပါ...!ကျွန်တော် Serial Key လေးနှင့်အတူ အမည်ပါထည့်ပေးထားပါတယ်...! Install လုပ်ရင် ကိုယ့်စက်မှာရှိတဲ့ PLAYER ကိုအမှန်ချစ်လေးတွေ ချစ်ထားပေးပါ..!Support လုပ်ပေးနိုင်သော Player တွေကတော့....
Album Player... BSPlayer..တွေဖြင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 1.67MB ရှိပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
No Response to "Mini Lyrics 7.0.676 Full Version Serial...!"